အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: အရှူပ်အရှင်း တရုတ်ဟင်း
အင်းတခါလာလည်းဆီပြန် တခါလာလည်း ဆီပြန်ဆိုတော့ ပရိတ်သတ်တွေပျင်းနေမှာစိုးတာနဲ့ ဒီတခါတော့ မူလလက်ဟောင်းဒေါ်ချမ်း ရဲ့ လင်ညီအမ လီရှောင်ချမ်း ကိုခေါ်ပြီး တရုတ်လိုချက်ခိုင်းပါတယ် အဲ့တော့ ဘာချက်ရမလဲလို့တွေးတဲ့အခါမှာ လီရှောင်ချမ်းစဉ်းစားမိတာက ငါးပေါင်းပါပဲ ချက်ရလွယ် စားလို့ကောင်းဆိုတဲ့ ဒေါ်ချမ်းမူနဲ့လဲညီရမယ်ပေါ့နော် အဲ့လိုနဲ့......................
ပြီးရင်တော့ အောက်ပါအရည်အချင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ ကောင်လေး အဲလေ......ဘာတွေရေးနေမိပါလိမ့်
ဒါလေးကတော့ ခုနက ပေါင်းအိုးထဲကနေထုတ်ပြီးတော့ စားပွဲပေါ်တည်ခင်းထားတဲ့ ငါးပေါင်းပါ စားခါနီးကျတော့ နံနံပင် အုပ်လိုက်ပါတယ် ဘေးပုံက နံနံနဲနဲ ပြန်ဖွလိုက်တာပါ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ကြွား.....အဲလေ ပြရအောင် ငါးမပေါ်တော့လို့ .............
အဲဘေးကတပုံကတော့ တီ့လုပ်ထားတဲ့ ရှမ်းပြည်ဘက်မှာစားတဲ့ အမှုံ့ပါ ငရုတ်သီး ဆား အချိုမှုန့် နဲ့ ပဲပုပ်ထောင်းထားတဲ့အမှုန့်ကိုထည့်မွှေထားတာပါ ကြိုက်တတ်တာနဲ့စားကောင်းပါတယ် ငါးကင်လေးနဲ့စားရင်လဲ အသေကောင်းတာပါပဲ လောလောဆယ်တော့ သရက်သီးစိမ်းနဲ့ စားပါမယ် ရှလွတ်................
ပြီးတော့ ဆားရည်စိမ် ဇီးဖြူသီး နောက်တော့ သရက်သီး ..................ဒီလိုစားပါတယ်နော်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာတော်မူကြပါစေရှန်.......................
Posted by တီချမ်း at 10:26 PM
Labels: ဆီပျံ, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, ဟင်းရည်, အရွက်ကြော်, အပေါင်း
Bino December 12, 2009 at 8:31 AM
You made me my mouth water.
But I do not eat Myanmar cooking style.
If I have wings, I'll fly to your good galley.
Rita December 12, 2009 at 10:59 AM
အမလေးဟဲ့ ငါးအမျိုးပေါင်း ဒီလောက်များမှန်း မသိပေါင်။
နွေးနေခြည် December 12, 2009 at 12:16 PM
ငါးမပေါင်းတတ်တာနဲ့ အတော်ပဲ.. တီ့နည်းလေးမှတ်ထားလိုက်ပြီ။ ငါးနံမည်လည်း အီးလို မှတ်ထားလိုက်ပြီ။း)
အန်တီချမ်း December 12, 2009 at 1:35 PM
အန်တီချမ်း December 12, 2009 at 7:22 PM
Glacier: ဗျို့ ဟင်းချက်နေတဲ့ အဒေါ်ကြီး ညှော်တယ်ခင်ဗျ။ :(
12 Dec 09, 15:03
Glacier: တီရေ သားရည်ကျပြီးပြန်သွားတယ်။ ပို့လိုက်ပါလား Nakhon Chai Air နဲ့။
Rita December 12, 2009 at 11:40 PM
ဒါနဲ့ ပုစွန် ၃ ကောင် မွေးထားတယ် ဆိုတာ ဘာလုပ်ဖို့လဲ။ သုတ်စားဖို့လား။
sweetpeony December 15, 2009 at 11:20 AM
မှတ်ထားပါတယ် ၁၅မိနစ်တိတိ မပိုဘူး သေချာမှတ်သွားတယ်...
ပစ္စည်းက အစုံရှိပြီ .. အိုးက လွဲရင်း(
တီ့ နည်းကို သုံးမယ်..
စကားမစပ် မွေးထားတယ် ဆိုတော့ ပုစွန် သုံးကောင် ပြပါ.. ပြပါ...
suyi nandar April 15, 2012 at 9:45 PM
တီရေ...ငါးဆားငံသီးပေါင်း ချက်နည်းလေးတင်ပေးပါလားဟင်..ပေါင်းစားချင်လို့ပါ..တီ blog ထဲကဟင်းတွေလဲအပြတ်ဆွဲသွားတယ်နော်..ကောင်းမှကောင်းပဲ..